Scoutsee: Ita Mari yeMagariro Nhau neakabatana Chitoro | Martech Zone
Scoutsee is chishandiso chefoni chinobvumidza chero munhu kuti aite mari nekusimudzira zvigadzirwa zvavanoda uye zvavanoshandisa mazuva ese pa Instagram, Facebook neTwitter. Maitiro ari kuseri kwepuratifomu akanaka. Gadzira rako pachako chitoro paScoutsee, wedzera zvigadzirwa zvako, uyezve iyo nharembozha inoita kuti iwe ugovane kugadziridza kune izvo zvigadzirwa neakafupiswa URL kune chigadzirwa muchitoro chako. Kana chigadzirwa chakatengwa kuburikidza nepositi, mushandisi weScoutsee anogamuchira komisheni kubva mukutengesa, kazhinji pakati pematanhatu negumi muzana emutengo wekutenga.
Ivo vanokanganisa pamasocial network vese vanotarisirwa ne influencer network uye vamwe vepakati kumabhizimusi ekushambadzira ekusimudzira zvigadzirwa zverudzi. Scoutsee inogonesa mamirioni evanokurudzira pa Instagram kuti vagadzirise kwavo kwavo kutapurirana, pachavo kana zvakananga nemaki. Pa Instagram, pane vanopfuura mamirioni matanhatu vashandisi vane vanopfuura zviuru gumi vateveri. Tom Kwon, co-muvambi uye CEO weScoutsee.
Zvimiro zveScoutsee zvinosanganisira:
Shoppable Instagram - Ramba uchigovana zvaunoda pa Instagram uye sarudza zvaunoda kuti zvitengeseke. Chigadzirwa pics uye zvakatumirwa pa Instagram drive Vateveri kune iyo Scoutsee mushandisi chitoro chake cheakakomberedzwa zvigadzirwa, imwe neimwe ine yakananga kubatana yekutenga. Kana kutenga kwaitwa, iyo komisheni inoendeswa kuScoutsee's PayPal kana kubhengi account.
Yega Chitoro - Nyore kudzora uye kusimudzira zvigadzirwa zvaunoda uye zvaunoshandisa mazuva ese.
Mamirioni eZvigadzirwa - Sarudza zvigadzirwa kubva kuzviuru zvemhando uye nyore kubatanidza kune yako yekumashure positi. Iyo Scoutsee chigadzirwa katarogu ine zvinopfuura zviuru zvisere zviuru, zvinosanganisira Amazon.com, Rakuten uye EBay, nemazana emamiriyoni ezvigadzirwa mumapoka ese.
Yechokwadi-nguva Dhibhodhi - Wona uye woongorora zvaunotenga zvaunogona kutumira uye kuti yako yepamberi iri kuita sei
Dhawunirodha iyo Scoutsee App!
Scoutsee inoshanda nema brand uye maarhente ekuvandudza echinyakare ekurudzira mapakeji ekunyorera Mascoutsees uye inopa madhibhodhi ekuteedzera mashandiro.
Scoutsee yakaedzwa beta uye parizvino iri kuronga kuvhura kudyidzana kwayo neSpartan Race, inotungamira yezvipingamupinyi yepasi rose. Spartan Race yakasimudzira nharaunda yayo inesimba yekukurudzira, iyo yaisimudzira zviitiko uye zvigadzirwa zvehupenyu kuburikidza nezvitoro-zvinokwanisa zvinyorwa zvinofambiswa neScoutsee pa Instagram kune kwavo kukuru kwekutevera. Dzvanya kuburikidza nemitengo yakaona kuwanda-manhamba ekuwedzera uye shanduko dzaive dzakanyanya pamusoro pemaindasitiri zviyero.
Tags: yakabatana dashboardaffiliate marketingzvakabatana networkyakabatana nechemberiAmazonebaykushambadzira kushambadziraInstagraminstagram Shoppingmukutenchiendashoppable instagrampasocial media yakabatana kushambadziraTom kwon
Flurry: Chaiyo-Nguva Ongororo yeMafoni Kunyorera
Aug 16, 2016 na7:07 PM
Douglas, izvi zvakanakisa! Handisati ndambonzwa nezvazvo asi zvirokwazvo ndichave ndichitarisa mazviri. Ndatenda nekugovana!